Turkiga oo sarkaal hore oo Falastiin ah ay ku dooneyso $700 kun, macluumaad horseeda in lasoo… – Hagaag.com
Turkiga oo sarkaal hore oo Falastiin ah ay ku dooneyso $700 kun, macluumaad horseeda in lasoo…
Posted on 23 Nofeembar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Turkiga ayaa iclaamiyey Jimcihi inuu ku dari doono sarkaal hore oo Falastiin ah oo fadhigiisu yahay Imaaraadka Carabta Mohammad Dahlan, liiska dadka argagixisada ee la doonayo wuxuuna ku yaboohay $ 700,000 qofkii ka keena macluumaad horseeda in la soo xiro.
Sida uu ku soo waramay weriyaha Al Jazeera ee Ankara in Wasiirka Arimaha Gudaha ee Turkiga Suleyman Soylu uu u sheegay wargeyska Hurriyet ee Turkiga in Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Turkiga ay ku dari doonto magaca Maxamed Dahlan liiska argagixisada ee casaanka ah, oo ka kooban argagixisada uu doonayo Turkiga.
Wuxuu tilmaamay in abaalmarin gaareysa $ 700,000 la siin doono kuwa gacan ka geysta bixinta macluumaad gacan ka geysanaya qabashadiisa.
Turkiga ayaa ku eedeeyay Dahlan inuu yahay shaqsi calooshiisa u shaqeysta ah oo u shaqeeya dowlada Imaaraadka, wuxuu ka qeyb qaatay isku daygii afgambi ee 2016kii oo ka dhanka ahaa Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Wareysi gaar ah oo uu siiyey Al Jazeera, Wasiirka Arimaha Dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay argagixiso isla markaana basaas u yahay Israel.
Waxa kale oo uu ku eedeeyey Cavusoglu UAE “inay hoy siisay argaggixiso”, wuxuuna ku yidhi wareysigiisii ​​Al Jazeera, “Dahlan wuu cararay maxaa yeelay waa basaas Israel.” Wuxuu kaloo ku eedeeyey Imaaraadka, oo xiriir xun kala dhaxeeyay Turkiga, inay isku dayday inuu Dahlan lagu beddelo Cabaas.
Maxkamad reer Falastiin ah ayaa ku xukuntay Dahlan, 58 jir, asaga oo maqan saddex sano oo xabsi ah sanadkii 2016 oo lagu eedeeyey musuqmaasuq, waxay ku amartay inuu bixiyo $ 16 milyan, sida uu sheegay qareenkiisa.
Dahlan wuxuu madax ka ahaa adeegga amniga ee marinka Qaza, laakiin wuxuu lumiyay daboolkii siyaasiga ee lagama maarmaanka u ahaa ka dib markii Xamaas ay qabsatay ciidamadiisa 2007, taasoo horseeday in Fatah laga cayriyo marinka Gaza.